Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in ficilada dowladda uu shaki abuuray | Dhacdo
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in ficilada dowladda uu shaki abuuray
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay weerarkii Axadii ka dhacay Hotel Afrik ee Magaalada Muqdisho, laguna dilay dad uu ka mid ahaa Allaha u naxariistee General Maxamed Nuur Galaal.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa marka hore Alle uga baryay inuu u naxariisto General Maxamed Nuur Galaal, isagoona xusay kaalintii uu ku lahaa Ciidanka Xoogga Dalka iyo doorkii uu ka qaatay in maleeshiyada Al Shabaab laga xoreeyo qaybo ka mida Gobolada Dhexe, xilligii Maamulkii Ahlu Sunna
“Allaha u naxariisto Major General Maxamed Nuur Galaal. General Galaal wuxuu kaalin hoggaamin ku lahaa taariikhda Ciidanka Xoogga Dalka. Wuxuu kaloo kaalin mug leh ka qaatay dagaalkii kooxda argagixisada Al Shabaab looga xoreeyey Gobollada Dhexe.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay, bacdamaa Dowladda Federaalka ay cadow u aragtay sida uu sheegay dadka aan ku fekerka ahayn iyo kooxaha argagixisadaba ay dhalisay kalsooni darro, isla-markaana uu abuurmay shaki, cabsi, walwal iyo carro ka dhalatay inaanan la kala garan ficilada kooxaha argagixisada iyo waxa uu ugu yeeray shirqoolka siyaasadeed.
“Maadaama dowladda muddo xileedkeedu idlaanayo ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ay hagratay dagaalka kooxda Al Shabaab, isla-markaana si isku mid ah u cadawsatay argagixisada iyo inta ka aragtida duwan, waxaa lumay kalsoonidii, waxaana abuurmay shaki, cabsi, walwal iyo caro dhalisay in aan la kala sooci karin ficilka argagixisada iyo falka shirqoolka siyaasadeed.” Ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku soo aadaya, xilli dadka qaarkii ay su’aalo ka keenayn, sida Shabaabka ugu suurtagashay in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ku weeraraan hotelkaasi, oo ku yaala goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo.